Ny fiverenan’ny ny zanak’ondrilahy eo 2016! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
I Jesoa Kristy,
Iray Andriamanitra, iray ny Tany, firenena iray.
Milaza amintsika ny Baiboly fa Andriamanitra « dia » ary Izy no nahary izao rehetra izao, ny tany sy ny olona.
Araka ny teny hebreo kalandrie izahay amin’ity taona ity 2016, ny 5777faha- taona ny fahariana ny olombelona Andriamanitra.
Inona no mba miaiky mifanipaka amin’ny siansa pseudo-porofo amin’ny alalan’ny hay fantarina olombelona mihoatra noho ny tapitrisa taona.
Nandritra ny tantara, ny Baiboly, dia nampianatra ny olona mba hitandrina izany kofehy ny firaisana eo amin’Andriamanitra sy ny olombelona.
Indrisy, ny olona fa tsy ny fahazoana ho akaiky kokoa an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fampianarana izany dia foana ny miala.
Na dia eo aza ny fampianarana ao amin’ny Baiboly, maro ny hevi-diso no nipoitra ny tantaran’ny olombelona. Nisy mpivavaka masoandro, ny volana ary ny spooky andriamanitra foronin’ny saina. Men mihitsy aza tsaohina ho andriamanitra ao amin’ny ohatra ny Farao.
Fa ny olona rehetra amin’ny izao tontolo izao ankehitriny na dia bebe kokoa ny tsinontsinona an’Andriamanitra! Ny lehilahy fotsiny nandà ny mpamorona, na ratsy kokoa noho ny olona miasa toy ny hoe tsy misy Andriamanitra.
Noho izany Andriamanitra dia tsy eo ao an-tsaina ny olona ankehitriny, ny olona io dia nanomboka ny manonofy ho lasa andriamanitra.
Frantsa na dia eo aza ny Clovis sy Joan ny Arc, dia nanohy ny fahatezerana an’Andriamanitra nandritra ny tantarany (ny famonoana ny Protestanta tamin’ny St. Bartholomew, Fanenjehana Mpamosavy, ny fisamborana sy ny famonoana ny Templars sy Jeanne Arc etc ..) sy Frantsa dia nivoaka farany Andriamanitry ny fanjakana nandritra ny revolisiona 1789.
Ny Repoblika dia te fiara amin’Andriamanitra avy amin’ny fiainan’ny Frantsa tamin’ny 1789, ary hitantsika izay mitondra izany amin’ny farany.
227 taona tatỳ aoriana, Frantsa tafintohina, nanafika sy nandroaka ny fananany avy ireo pseudo-milamina mpanafika izay raisina ho manan-danja, nanampy, mitoetra, sakafo, nikarakara maimaim-poana, ary na dia aloa isam-bolana amin’ny alalan’ny hetra!
Kanefa ny Frantsay dia azo inoana fa ho velona « amin’ny fahantrana » na dia eo aza ny asa maharary matetika sy ny entana mavesatra kokoa ny fianakaviana kely teti-bola, « ao amin’ny fahoriana » , rehefa namely ny tsy fananana asa.
Ao amin’ny fisotroan-dronono izy ireo azo antoka tsara indrindra sy amin’ny ratsy indrindra eo amin’ny fahoriana, rehefa ela ny fiainana niasa matetika tena mafy.
Ny Frantsay dia fanalam-baraka ny olona, ​​ary voaheloka ny tsy fandriampahalemana sy ny fahoriana ho tombontsoan’ny ireo mpanani-bohitra avy any ivelany amin’ny izay noterena ny governemanta hiaina miaraka.
Zavatra tsy velona manana vola napetraka ka dia ny Frantsay izay manohana ny olona izany fanaintainana lehibe « hetra, haba, sarany sy ny fiampangana dia foana ny zava-dehibe kokoa, raha tombontsoa ara-tsosialy hampihena hatrany amin’ny fahafantarana fa ny Frantsay ny olona manana fahasahiranana lehibe amin’ny fitsaboana.
Ny filoha François Hollande mihitsy aza, amin’ny kely indrindra amin’ny boky ny taloha-tompovavy, nanevateva ny vahoakany amin’ny alalan’ny fanomezana anarana azy ireo: « Ny banga ridana ».
Ity teny mahamenatra, mahamenatra, mahamenatra sy maniratsira dia Kanefa ny taratry ny zava-misy, satria marina fa ny frantsay tsy afaka manasitrana tsara.
Ny vola lany amin’ny fikarakarana sy ny dentures nify matetika prohibitive ho an’ny olona miaina ao anatin’ny fahantrana sy ny fahoriana, ary matetika izy ireo raha ny marina banga ridana olombelona.
By hanohitra ireo fitsaboana sy ny dentures Afaka rehetra ireo mpanani-bohitra avy any ivelany!
Kristianina isika hahatakatra fa izany dia ny tsy fisian’ny Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny Frantsa nitarika antsika ho amin’izany toe-javatra mahatsiravina.
Ary mba hahatonga antsika hahatakatra, Andriamanitra te vahiny ireo « mpanafika » dia avy amin’ny fivavahana ny Losifera « finoana silamo. »
Rehefa mahita isan’andro isika, velona amin’ny andro farany ary hifarana amin’ny fiverenan’ny Tompontsika sy Jesosy Kristy Mpanjaka.
Fanantenana lehibe aho fa io fiverenana ho amin’ny volana Septambra, na ny volana Oktobra 2016
Saingy tsy maintsy miaiky fa efa diso aho ary tsy afaka manavaka fa tamin’ity indray mitoraka ity dia mbola diso aho.
Indrisy, dia tsy maintsy miandry am-polony taona vitsivitsy ny fiverenan’ny Tompo.
Nefa manantena aho fa tsy noho ny fanaintainana dia nanomboka (izay azo lavina) dia hamely amin’ny hery lehibe hatramin’ny 29 Septambra 2008.
Fantatsika ihany koa fa mbola hiharatsy kokoa hatrany izy ireo mba hiverina amin’ny voninahitr’i Jesosy Kristy satria ny fiverenany dia tsy maintsy ho toy ny tamin’ny ny fanaintainam-piterahana.
Toy izany koa ny fanaintainana dia miandalana, ary afaka ihany no mihombo bebe kokoa!
Raha i Jesosy Kristy, dia niverina amin’ity taona ity 2016, tsy ho ela isika ho afaka amin’ny rehetra ireo fanaintainan’ny fiainana. Noho izany dia zava-dehibe ny hitoetra ao amin’ny fiombonana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka mangataka famelan-keloka isan’andro noho ny fahotantsika, ny fahadisoantsika, ny fahadisoantsika, ny asa ratsinay sy ny fisainan-dratsy.
Manana eo amin’ny fiainantsika manasongadina ny soatoavina kristianina amin’ny alalan’ny fanampiana izay rehetra mangataka antsika fanampiana anisan’izany ireo mpanani-bohitra.
Saingy isika koa dia tsy maintsy hiaro ny kolontsaina, ny tantara, ny soatoavina sy ny firenentsika Frantsa.
Mariho izay lazaiko dia manan-kery ho an’ny Frantsa isaky ny firenena any Eoropa no nanafika toy ny fiteny, ny tantara sy ny firenena samy hafa, ny finoana kristianina dia mahazatra.
Tokony hanazava fa ny fahalemena ny fitondram-panjakana mampirisika ny firenena rehetra amin’ny tany Ejipta izay tsy tonga avy any Syria, fa avy amin’izao tontolo izao hitady fiainana tsara kokoa, ary indrindra indrindra any Eoropa any Frantsa.
Ny andro farany talohan’ny ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy dia ho amin’ny famaritana ny olombelona henjana indrindra. Tsy maintsy mivavaka mafy noho ny zava-drehetra hatao amin’ity taona ity, 2016.
Izany mamela kely loatra ny fotoana mba hitondra ny isan’ny lehibe indrindra manan’aina amin’i Kristy amin’ny alalan’ny batisa.
Izany ihany koa angamba fa ny batisa ho atolotra ho an’ny rehetra Andriamanitra mpifindra-monina izay nandefa azy ireo tany Eoropa. Aza misalasala ny hanolotra batisa ny rehetra izay mangataka ny fanampianao izahay.
Eritrereto fa raha Andriamanitra no te, dia mety ho eo amin’ny toerana rehetra ny fianakaviana ny mpifindra monina.
Mitoera manetry tena, ary misaotra an’Andriamanitra noho ny fitiavana izay mitondra antsika na dia eo aza ny fahotantsika, ny fahadisoantsika, ny fahadisoantsika, ny asa ratsinay sy ny fisainan-dratsy.
Indrisy, raha i Jesosy Kristy no mora tonga sy niverina ho tatỳ aoriana, mba Ho manana olana lehibe tamin’ny taona 2017.
Izany no ho ny fifidianana filoham-pirenena tany Frantsa sy ny feon’ny fieritreretany ny tsirairay ao amin’ny handeha hifidy fa ny mpifaninana ny safidy.
Tokony nefa ho mailo fa ny Repoblika dia aloky ny tenany sy ny zony hitondra efa nofoanana sy ny vola.
Ny hery mitarika sy ny hery mitarika ao Frantsa eto amin’izao tontolo izao satria miha-périclitent Jeneraly De Gaulle.
Raha tsy misy atao mba tanteraka hampitsaharana sy hanova ireny fanafihana, amin’ny andro ho avy dia ho frantsay taona ny Kristianina vitsy an’isa sy ny Repoblika raha mbola misy fa tsy ara-pivavahana intsony sy exégèse izany fiovana ho amin’ny fomba demokratika ny fifidianana.
Ny manam-pahefana no voarara ny milaza ny marina amin’ny olona. Ary tsy misy tarehimarika ofisialy misy amin’ny isan’ny Silamo Frantsay fa na iza na iza dia afaka mahita amin’ny isan-tanàna, eo amin’ny manodidina rehetra ny vondrom-piarahamonina silamo dia miha manan-danja any Frantsa sy Eoropa.
Ao Mazava fa ny maha zava-dehibe ny fiaraha-monina ireo Mampiaiky!
Support ao amin’ny biraom-pifidianana ireo politika tsirambina ny fifindra-monina silamo dia miala ao amin’ny Finoana, Kristianina sy i Jesoa Kristy.
Mpitsara ary manameloka mpifindra monina ihany koa ny miala ao amin’ny Finoana, Kristianina sy i Jesoa Kristy.
Fa aza adino fa ny fiantrana dia manomboka amin’ny tena, ary tsy maintsy ho ny iray ihany.
Noho izany na inona na inona ny fanapahan-kevitra atao amin’ny voafidy ny manam-pahefana rehetra mpanafika ireo mpifindra monina, dia tsy maintsy miantoka fa ny fanapahan-kevitra dia ampiharina amin’ny fitiavana sy ny fiantrana Kristiana.
Tamin’ny fotoana ny olona mandà an’Andriamanitra, nanao hoe:« humanists » izy ireo miahiahy kokoa ny momba ny nanjo ny hafa ho toy ny anjara sy ny lahatra ny ny fanahiny.
Noho izany dia azo inoana fa taorian’ny fifidianana filoham-pirenena, na inona na inona ny fifidianana fanambarana sy ny teny fikasana, mpifindra monina tsy fampindramam mbola hamafa manerana an’i Eoropa, ary indrindra any Frantsa.
Toy izany koa antony mamokatra foana ny vokany mitovy, fa ny Islamista teo an-Atsinanana, izy ireo no hanao izany any Eoropa.
Herisetra, ady an-trano sy ny ady ara-pivavahana, dia noho izany azo antoka fa hamelombelona ny mangidy taorian’ilay taorian’ny fifidianana filoham-pirenena frantsay. Raha tsy eo anatrehan’i !!!
Ao anatin’ny tontolo izay ny Papa mihitsy no very finoana ka ny manaiky ho marina ny fivavahana rehetra, ary toy ny lalana mitondra mankany amin’Andriamanitra, noho izany dia mahagaga fa maro ny rahalahy sy anabavy, izay nitandrina ny tena dikan’ny ny finoana dia mitombo voafetra.
Voafetra ihany koa ny lasa hatrany ny fahafahana. Tsy ho ela isika dia azo antoka fa tsy hanana ny fahafahana mba hiampanga asa rehetra manohitra ny finoana kristianina, manohitra ny fiangonana sy manohitra ny herisetra eo amin’ny rahalahy sy anabavy any Frantsa sy ny sisa amin’ny tontolo izao.
Noho izany ry rahalahy sy ranabaviko malala, dia efa nanoratra boky roa tamin’ny voalohany varavarana ao amin’ny lohateny ny bilaogy anarany.« Ny mpitory ny Fiverenan’i ny Mpanjaka » ary manjavozavo « sy ny maizina dia tonga mazava » Ity boky ity ao amin’ny tapany voalohany dia manaporofo ny misy Andriamanitra, ary manazava ny antony mahatonga ny olona maro, izay noforoniny ary inona no ho ny anjaran ‘ireo izay nifidy ny hanaraka ny sitrapon’Andriamanitra. Ny tapany faharoa amin’ity boky ity dia ahitana ny sasany ny lahatsoratra manan-danja aho, nandinika sy hamonjy ny mety fanakatonana ny bilaogy tsy ny sitrapoko.
Ny faharoa boky mitondra ny lohateny « Frantsa, Fandrosoana sy ny Repoblika adrift » dia izay manana Subtitle dia « Ny Mpitoriteny Miverena ilay Mpanjaka » Nanazava tao amin’ny tapany voalohany ny fomba dia voafitaka ka namadika ny tantara fatidiquement mba hahita ny tenantsika amin’ny andro farany amin’ny fanandevozana. Izany ihany koa ny manazava ny fomba mety hivoaka Frantsa ity Rot, « Fiverenana ny mpanjakan’i Frantsa, » raha ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy dia tokony hatao ao am-polony taona vitsivitsy. Ny tapany faharoa amin’ity boky ity dia ahitana ny sasany ihany koa ny lahatsoratra efa nihevitra zava-dehibe ihany koa mba hamonjy ny mety fanakatonana ny bilaogy tsy ny sitrapoko.
Na inona na inona mitranga, ny fiverenan’ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy dia ho an’ny taranaka, dia ho azo antoka tanteraka! Ary tsy hamela ny aloky ny fisalasalana!
Fa ny Baiboly dia milaza amintsika koa fa fony i Jesoa Kristy dia hiverina ho any amin’ny tena finoanao no efa nanjavona tsy ho amin’ny tany.
Koa na dia resy lahatra aho ny antomotra ny fiverenana sy ny promptness ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy ho an’ny taona 2016, ny zava-misy mbola fa mety ho diso aho ary boky roa dia azo antoka fa hanampy anao satria Andriamanitra ihany no mahalala izay ny fahavalo dia afaka ny finoana.
Hitantsika ka mitandrema fa nanomboka tamin’ny 2008 ny Kristianisma dia nidina ho any amin’ny helo. Ny rahalahy sy anabavy eran-tany no maty tao amin’ny ankapobeny tsy miraharaha ny voafidy ny manam-pahefana. Hitantsika fa ny finoana silamo niady ny Kristianina.
Ny Septambra 27, 2015 Papa François no nanda an’i Jesosy Kristy mihitsy aza tao amin’ny Katedraly St. Patrick any Etazonia, mitovy amin’ny iray fanambarana ofisialy ny maty ny fiangonana katolika atao amin’ny Papa François, izay efa tsy nanana ny toetra ny asa papa rehefa nanendry March 13, 2013.
Hitantsika fa mandeha ny fotoana bebe kokoa, Arakaraka ny« Kristianina » dia nifidy ny ary nampiditra ny Dock.
maizina andro mialoha, noho izany dia nanapa-kevitra ny hanoratra boky roa izay ho ilaina ny manomana fivoriana, na miafina malina amin’ny maintsy ho toy ny Kristianina voalohany, na dia afaka mitory sy indray mandra-fiverenan’ny Tompo.
Fanantenana, na izany aza, fa izany no tsy ilaina ary amin’ity indray mitoraka ity no tsara ka i Jesosy Kristy no tena indray amin’ity taona ity 2016 ho ny volana Septambra na Oktobra, mihevitra aho fa ny tamin’ilay fotoana ny andro firavoravoana amin’ny trompetra eo 03 ary Oktobra 4.
Nohazavaiko tao amin’ny bilaogy ny tamin’ny herinandro lasa ny ara-Baiboly ny fotoana farany, nandritra ny fito taona dia efa naminany ny mpaminany Daniela, 600 taona talohan’ny voalohany fiavian’i Jesoa Kristy.
Ny lasa fito taona hanakatona ny farany ny fotoana, dia ny famaizana avy amin’Andriamanitra. Izany no voalaza tao amin’ny faminaniana fa io fe-potoana fito-taona dia ahitana ny roa in-telo taona sy tapany, ary ny faharoa nandritra ny telo taona sy tapany, ny fanaintainana dia ho be mamiratra.
Rehefa nanambara tamin’ny lahatsoratra ny fiverenan’ny JESOA KRISTY NY 14 MEY OR 15 Septambra 2015! NANDRITRA ny andro firavoravoana amin’ny trompetra ny fiverenan’i Jesosy Kristy tsy maintsy hirotsaka an-tsehatra amin’ny faran’ny ny fito taona ny fahoriana, ny voalohany no miorina ny 29 Septambra 2008 manaraka ny tsenam-fianjerana ny Wall Street, satria hery dia ny manamarika fa satria dia nanambara famantarana rehetra sy ny faminaniana ny amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy no mitranga miaraka bebe kokoa ny hery sy ny maridrefy.
Ny fiverenan’ny Tompontsika maintsy hirotsaka an-tsehatra ho Septambra na Oktobra 2015. Na izany aza anefa isika rehetra hita fa fahadisoana. Na izany aza dia tena ny fanaintainana sy mitombo nanomboka tamin’ny 29 Septambra 2008.
Ny fahadisoana aho Heveriko atao amin’ny tsy maka tafiditra ao fa ny faminaniana voalaza indroa telo taona sy tapany.
Takatro ihany nony farany fa raha ny faminaniana voalaza indroa telo sy tapany taona dia maty ny fotoana eo anelanelan’ny amin’ny roa fe-potoana telo taona sy tapany.
Ny fe-potoana voalohany tamin’ny Martsa 2012 nifarana amin’ny alalan’ny famantarana lehibe iray any an-danitra izay indrisy fa tsy niraharaha toy ny teo Mizarazara sy tsy nampoizina: teny espaniola lahatsary.
Ny tapany faharoa telo sy tapany dia manomboka ao ny hevitro ny fanendrena ny Papa François 13 Martsa 2013 ary dia mazava fa ny fanaintainana sy hiharatsy hitohy hatrany amin’ny faritra rehetra.
Telo sy tapany taorian’ny Martsa 13, 2013 dia mitondra antsika ho Septambra 13, 2016!
Noho izany, tsy maintsy sahy miaiky. Ny fanadihadiana ny famantarana rehetra sy ny faminaniana voalaza ao amin’ny Baiboly, mba hanambara ny fiverenan’i Jesosy Kristy maneho ny lava lisitry ny hetsika isan-karazany fa miaina eto an-tany.
Loza, horohoron-tany, afo, oram orana, oram-baratra, Rivo-doza, Exodus, areti-mifindra, mosary, herisetra, ady sy filazana ady, fampihorohoroana, fahaverezan’ny soatoavina, maro no maty ny trondro, vorona sy ny biby ary ny biby fiompy tsy misy fanazavana dia isan’andro ny fiainana ny tany sy ny olombelona. Ireo zava-nitranga dia naminany mba hanambara ny fiverenan’ny Tompo sy Mpanjaka, i Jesosy Kristy, ilay hany Andriamanitra zanak’i tonga mba hanjaka eto an-tany mandritra ny arivo taona maro ho avy mandra-Olona ny Fara Andro.
Eny hafahafa araka ny mety ho toa angamba isika momba ny hihaona ny Mpamorona.
Te-ho malina ka lazao angamba ary miaiky fa Izaho no mbola mety indray mandeha diso.
Tsy izaho no mpaminany efa fantatrao ka tsy manana henatra amin’ny miaiky mety ho diso. Na izany aza, raha nandao antsika i Jesoa Kristy famantarana dia ny hahatonga antsika hijery sy miandry raha mbola manome antsika ny hery sy ny fanantenana handresy ny zava-tsarotra ilaina ny mifandray amin’ny andro farany.
Izay ny teny soa mahafaly ny amin’ny fiverenan’ny Tompontsika.
Fa azonao an-tsaina fa raha misy vaovao tsara, dia misy koa ny vaovao ratsy.
Ny voalohany dia ny vaovao ratsy dia hoe ho avy volana handeha ho nandiso sarotra rehefa mitarika tena akaiky ny andro ny fiverenan’i Jesosy Kristy sy ny andro farany no ho mafy indrindra. Dia ho ny fotoana ny andro ny fahatezeran ‘Andriamanitra.
Noho izany dia tena zava-dehibe amin’ny andro ho avy volana ho tena mazoto amin’ny vavaka, mangataka ny famelan-keloka sy ny fibebahana.Manarakaraka izany, dia mety ho diso aoriana loatra !!!
Ny faharoa vaovao ratsy dia hoe tsy fantatro raha ny fampakarana ny fiangonana dia ho tamin’ny minitra farany, na talohan’ny andron’i andro ny fahatezeran’Andriamanitra.
Mivavaha ry rahalahy sy anabavy malala, mba ny fiverenan’ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy, dia tsy ny soa ela, satria ny fanaintainana ho hay zakaina kokoa ho an’ny maro amintsika.
Na izany aza dia mety ho isika na dia eo aza ny correct ny fanadihadiana nitarika miandry taona vitsivitsy kokoa ny fiverenan’ny Tompontsika sy Miala tsiny mialoha aho.
Ary ny lalan ‘ny Tompo dia, ka dia nahita, matetika tafiditry ny fahavalo!
Raha tsy maintsy miandry am-polony taona vitsivitsy dia ho tena sarotra ary hifandray ny sainy ho amin’ny zava-misy fa ny lainga ny mpanara-dia an’i Kristy ny fahavalo dia lehibe kokoa noho izy ireo hita, ary manasa anareo aho mba hijery ity lahatsary ity ao amin’ny bilaogy ity pejy: » HERE « mba hahazo hevitra ny halehiben’ny ny lainga no haharitra taona ny taona ny tany.
Ry malala rahalahy sy anabavy ao amin’i Kristy Jesosy Manasa anareo aho mba baiko ny boky mba Edilivre roa fanontana.
Andriamanitra anie hitahy anao sy hiaro anareo amin’ny tsara sy lalana tsara ny fitiavana, ny fiadanana, ny rariny, ny fangorahana sy ny fanetren-tena fa nanisy i Jesoa Kristy ary mitarika amin’ny alalany ho an’Andriamanitra.
Fa tsara kokoa ny fahatakarana izay no miandry ny olombelona, ​​Mamporisika anareo aho mba hamaky ny lahatsoratra ny fiverenana JESOA KRISTY HO AN’NY SEPTAMBRA OR Oktobra 2016
Ny Jiosy andro firavoravoana amin’ny trompetra mba hatao ny 03 sy Oktobra 4, 2016 tokony hahagaga antsika rehetra na teo aza ny ny Tany …. !
Teo am-pamaranana amin’ity lahatsoratra ity, Voamariko tao amin’ny fahitalavitra fa ny horohoro mbola voa fianakaviana maro ao amin’ny fanapoahana baomba tany Belzika.
Mijoro ho vavolombelona aho eto ny alahelo lalina sy hanasa ny rehetra ry rahalahy sy anabavy malala ao amin’i Kristy mba hivavaka ho an’ny niharam-boina sy ny fianakaviany.
Aza mihaino ny mankahala fa ireo fihetsika mahatsiravina ho antsika hahatakatra fa ny mpampihorohoro hanatanteraka ny famonoana amin’ny anaran’ny Andriamanitra antsoin’izy ireo hoe Allah!
Islam dia ny fivavahan’ny Losifera sy hatramin’ny niandohan’ny ny Islamista ny miresaka momba ny fitiavana fitaovam-piadiana an-tanana!
Ary milaza fa ny Papa hatrany fa ny fivavahana rehetra dia marina sy izy ireo ihany koa ny lalana ho an’Andriamanitra!
Aza adino kely fa i Jesoa Kristy hoe :
« Izaho no lalana ny fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny ahy! «
Andriamanitra anie hitahy anareo.